Zidane oo ay caawa habeen gaar ah u tahay… (Muxuu kaga dhigan yahay kulanka Eibar?) – Gool FM
Zidane oo ay caawa habeen gaar ah u tahay… (Muxuu kaga dhigan yahay kulanka Eibar?)
(Madrid) 14 Juun 2020. Tababare Zinedine Zidane ayaa caawa gaari doona darajada Miguel Munoz iyo Vicente del Bosque ee ah inay Real Madrid leyliyeen 200 kulan ama wax ka badan, waxaana kulanka Eibar uu Zidane u yahay kulankiisii 200-aad ee uu hoggaamiyo Los Blancos isagoo macallin ah.
Kaddib ku guuleysigii koobkiisii 10-aad ee uu la qaaday Real Madrid bishii Jannaayo ee sanadkan, Zidane waxa uu celcelis ahaan gaari doonaa in 20-kii kulanba uu koob ku guuleysanayay.
Waxaana taasi ay muujineysaa sababta uu ugu soo laabtay Santiago Bernabeu iyo in waayihiisa macallinimada loo xasuusan doono sidii waayihiisii ciyaareed oo kale.
Macallinka Faransiiska ah ayaa 131 guul gaaray 199 kulan oo uu horay u hor kacay Real Madrid, halka uu bareejo galay 42 jeer, waxaase afka ciidda loo daray 26 kulan, isagoo guulihiisa ay celcelis ahaan yihiin 66%.
Waxaa xusid mudan in Zidane markii uu kusoo laabtay xukunka Real Madrid gugii hore uusan ahayn mid la xajmi ah taliskiisii hore, maadaama xilligaas uu heystay celcelis guulo oo ah 70%, halka kusoo laabashadiisa kaddib uu celceliskiisa guuleed uu yahay 54%.
Dhanka kale, kooxda Zidane ayaa dhalisay 486 gool, halka laga dhaliyay 208 gool kaddib 199 kulan oo uu u maamulay kooxda ka dhisan Santiago Bernabeu.
Macallinkan ayaa sidoo kale heysta rikoor wanaagsan oo dhanka tartanka Champions League ah maaddaama illaa hadda aanan lagu reebin wareegyada bug-baxda ee tartammada Yurub, inkastoo kulanka lugta labaad ee wareegga 16-ka uu la balansan yahay Manchester City kaddib laga yaabo inuu rikoorkaas jabo.
Zidane ayaa guul gaaray 25 ka mid ah 39 kulan oo uu tartanka horyaallad Yurub ciyaaray isagoo tababare ah, celcelis ahaanna waa 64%, waana mid ka mid ah tartammada uu natiijooyinka wanaagsan heysto.
Isku soo wada duube, Zinedin Zidane ayaa kaliya hal jeer ku guuleystay La Liga, waxaana uu doonayaa inuu mar kale sare u qaado koobka horyaalka dalka Spain.
Shaxda rasmiga ah kulanka kooxaha Real Madrid iyo Eibar ee horyaalka La Liga oo la shaaciyay